कर्मचारीलाई हप्तामा तीन दिन बिदा दिने निर्णय ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कर्मचारीलाई हप्तामा तीन दिन बिदा दिने निर्णय !
कर्मचारीलाई हप्तामा तीन दिन बिदा दिने निर्णय !
काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण पछिल्लो ६ महिनायता घरबाटै कार्यालयको काम गर्ने संस्कार बढिरहेको छ ।विश्वका अधिकांश देशले कामको यस्तो शैली अपनाइरहेका छन् । नेपालमै पनि अहिले सानादेखि ठूला व्यवसायिक कम्पनीहरूको काम ‘वर्क फ्रम होम’बाट चलिरहेको छ ।
घरबाट निरन्तर रुपमा काम गर्दा आफ्नो पारिवारिक जीवन र व्यवसायिक जीवनलाई व्यवस्थापन गर्न असहज भइरहेको छ । बिहानदेखि बेलुकासम्मको काम अनि निरन्तर हुने अनलाइन मिटिङले कर्मचारीलाई घरबाट काम गर्नु नराम्रो सपना जस्तै भइसकेको छ ।
यसले मानिसको जीवनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भन्दै टेक जायन्ट गुगलले आफ्ना कर्मचारीलाई हप्तामा तीन दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई कोभिड–१९ को महामारी सम्मका लागि थप एक दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो । यसले कर्मचारीलाई सहज हुने विश्वास कम्पनीले गरेको छ । कम्पनीले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक थकान मेट्नका लागि यस्तो बिदा दिएको जनाएको छ ।
गुगलले जारी गरेको वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘हामी कर्मचारीलाई थप एक दिन बिदा स्वीकार गर्न आग्रह गर्छाै । त्यसका लागि व्यवस्थापकले आवश्यक वातवरण बनाउनुपर्नेछ । यदि कुनै दिन कार्यालयका लागि कर्मचारीको आवश्यक भयो भने उसले अर्को दिन बिदा पाउनेछ ।’
तर, प्राविधिकहरुका हकमा सबै खालको सुविधा भने उपलब्ध हुने छैन। उनीहरु हप्तामा तीन दिन बिदा बस्न सक्ने भएतापनि शुक्रबार भने बिदा लिन पाउने छैनन् ।
तीर्थस्थलमा भागदौड हुँदा १२ जनाको मृxत्यु १५ जना घाइते
दमौलीबाट घासीकुँवातर्फ जाँदै गरेको जिप दुर्घटना,चालक हरिको मृत्यु, रित्तो जिपमा थिए चालक मात्रै
कंगनालाई कसले दियो ज्यान मार्ने धम्की ? दिइन् यस्तो प्रतिक्रिया
ट्रकको ठक्करबाट एकको मृxत्यु
शरिरभरि गो लि बोकेर बाचिरहेका पुर्व मा ओवादी ल डाकु , कठै `पिर´ (हेर्नुस् भिडियो )